​Trump: Putin Wuu ka Hoggaan Wanaagsan Yahay Obama
Soomaaliya oo qof aan safar dibadda ah gelin uu soo ritay Coronavirus. Riix Halkan
Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa ammaanay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uu sheegay inuu ka hoggaan wanaagsan yahay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
Isaga oo ka hadlayey kulan dadweyne oo uu qabtay taleefishinka NBC, ayaa Trump waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in haddii uu madaxweyne noqdo uu xiriir wanaagsan la yeelan doono Putin.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Ruushka iyo Mareykanka ay leeyihiin dan isku mid oo ah inay ka adkaadaan kooxda Daacish.
“Russia waxa ay si xun u dooneysaa inay ka adkaato ISIS, si la mid ah sida aan u dooneyno” ayuu yiri Trump oo intaas ku daray in haddii xiriir wanaagsan ay le yeeshaan Russia ay si qarka ka tuuri karaan Daacish.
Donald Trump ayaa dhinac kalena ku celiyey fikirkiisa ah in Mareykanka uu qabsado goobaha saliidda laga soo saaro ee dalka Ciraq.
“Haddii aan qabsano goobaha saliida, ISIS ma jireyso, sababta oo ah ISIS waxa ay ku aas-aasantay awoodda iyo lacagta saliidda” ayuu yiri Donald Trump.
Deni oo baaq la xiriira gogosha Garowe u diray DF iyo maamulada 06.04.2020. 21:40
Habka cusub ee Puntland dooneyso in ay kula dagaalanto jariifka 06.04.2020. 19:00
Ra'iisul wasaare dib u bilaabay shaqo uu joojiyey Coronavirus awgii 06.04.2020. 17:40
Cavid-19: Taliban oo bilowday olole ay ku caawineyso Afghanistan 06.04.2020. 16:10
Xaaf oo bilooyin kadib Dhuusamareeb kula laabtey dalab naadir ah 06.04.2020. 15:20
Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo xukuumadiisa isbitaal ka maamulaya 06.04.2020. 15:07